Micheal Essien Oo Sheegay In Si Wanaagsan Loogu Soo Dhaweeyey Santiago Bernabeu - jornalizem
Micheal Essien Oo Sheegay In Si Wanaagsan Loogu Soo Dhaweeyey Santiago Bernabeu
Ciyaaryahanka qadka dhexe ee Real Madrid Michael Essien ayaa shaaciyay in uu si wanaagsan u la qabsaday Santiago Bernabeu.
Ciyaaryahanka reer Ghana ayaa ugu soo biirey Los Blancos amaah ahaan bishii August isagoo ka tirsanaa Chelsea waxana uu qirey inay ahayd arrin kedis ah oo uusan filayn in uu ku biiro koox ka dhisan Spain, balse hadda uu si wanaagsan ugu raaxeysanayo La Ligaha.
“Waxaan u malaynayay in xilli ciyaareedkan la joogayo Chelsea kadib diyaargarowgeenii,”ayuu u sheegay Punto Pelota.
“Marna ma fileyn in ay tan dhacayso markii aan ku soo laabtay July tababarka, balse ciyaarta kubbada cagta waa mid la yaab leh.
“Ma aha mid sir ah Jose Mourinho waxa uu ku leeyahay saameyn weyn mustaqbalkayga, waxa uu ahaa nin naxariis badan waxan uu ii raacay Ghana markii aan Chelsea wada joognay,markii ii sheegay in uu doonayo in aan Madrid imaadana waan aqbalay.
Essein oo ka hadlayay dabeecadaha Mourinho ayuu yiri: “Mourinho waxba isma bedelin. Waxa uu jecel yahay in mar walba ciyaaryahanadiisa ay si adag u shaqeeyaan. Waxana niyadiisu ay tahay in mar walba uu badiyo. Wuuna badiyaa ismana bedelin.
“Halkan lix toddobaad oo qura ayaan joogayaa, laakiin si wanaagsan ayaa la ii soo dhaweeyay,
“Illaa laga bilaabo madaxweynaha kooxda illaa tababaraha,shaqaalaha tababarka qof walba si farxad leh ayuu ii soo dhoweeyaa.